पाकिस्तानमा किन अाए १६ देशका सेना ? « Deshko News
पाकिस्तानमा किन अाए १६ देशका सेना ?
पाकिस्तान, असोज २९
काश्मिरको उरी घटनापछि भारतसँग युद्ध हुने अवस्था आइरहेका बेला पाकिस्तानले आफ्नो देशमा ठूलो सैन्य अभ्यास गर्ने भएको छ ।सेनाको शारीरिक र सामरिक क्षमता वृद्धि गर्न तथा युद्धको तयारीस्वरुप पाकिस्तानले १६ देशसँग मिलेर आउँदो हप्ता विशाल सैन्य अभ्यास गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
यो अभ्यास लाहोरमा हुनेछ । सैनिक अभ्यासमा भाग लिन १६ देशका सेना पाकिस्तान आउने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म श्रीलंकाको एक २५ सदस्यीय सैनिक दलसहित ८ देशका सेना लाहोर पुगिसकेका छन् । अन्य देशको नाम खुलाइएको छैन् । यो अभ्यास ६ दिनसम्म चल्ने बताइएको छ ।
पाकिस्तानको इन्टर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन्सलाई उद्धृत गर्दै न्यूज इन्टरनेशनले यो समाचार सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि २७ सेप्टेम्बरदेखि १० अक्टुबरसम्म पाकिस्तानले रुसी सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको थियो । त्यो बेला रुसी सेना पाकिस्तान आएको थियो । रुसी सेना आउँदा भारतमा हलचल मच्चिएको थियो ।